शिक्षण अस्पतालमा भिड् बढयो, प्रम ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य - Dainikee News::
शिक्षण अस्पतालमा भिड् बढयो, प्रम ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
काठमाडौं, कात्तिक १२ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियो सेन्टरको आइसीयुमा उपचार भइरहेको छ । ओलीको अवस्था बुझ्न मन्त्री, नेतादेखि कार्यकर्ताहरु अस्पताल पुग्दा भिड बढदै गएको छ ।
यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियो सेन्टरको आइसीयुमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थबारे अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरी सामान्य रहको जनाएको हो ।
ओलीको छातीमा संक्रमण देखिएको तथा शरीरमा चिनीको मात्रा असन्तुलित देखिएको हुँदा केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
को को गए ओलीलाई भेटनलाई ?
ओलीको अवस्था बुझ्न मन्त्रीदेखि नेतासम्म अस्पताल पुगेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रवधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, आपूर्ति मन्त्रि मातृका यादवदेखि विभिन्न मन्त्रीहरु अस्पताल पुगेका छन् । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालदेखि थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता अस्पताल परिसर पुगेका छन् ।
को को चिकित्सक संलग्न छन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कलेजो विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सक दिलिप शर्मा, छातीरोग विशेषज्ञ सन्तकुमार दास, मुटु रोग विशेषज्ञ अरुण सायमी, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ सुवास आचार्य, मृगौला रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सक दिब्य सिंह शाह र नाक कान घाँटी विशेषज्ञ प्रकाश काफ्लेले उपचार गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पतालमा भर्ना
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड अस्पतालमा
प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक १२, २०७५ /Monday, October 29th, 2018, 10:24 am